Foundation Initiative Foundation
Beerashada waa Geoffrey iyo Leann Johnson ee dhiigga. Leann wuxuu ku koray gabdho beer u dhow buur
Lake, oo ku taal koonfur galbeed Minnesota. Ilaa 34 sano, iyada iyo Geof waxay gurigooda ka sameeyeen beerkiisa qoyskiisa oo u dhow Windom. Waxay ka dhex shaqeeyaan bulshada sida waxyaabo ay ka mid yihiin masraxa maxalliga ah, guddiga xaafadda, FFA, waxayna bixiyaan Hay'adda Southwestization Initiative (SWIF). Maalgelinta McKnight Foundation ayaa dhalisay kumanaan shakhsi oo deeq-bixiyeyaal ah sida qoyska Johnson. Iyo, taageerada McKnight waxay u oggolaatay SWIF inay abuurto barnaamijyo gaar ah si ay ugu adeegto degaankeeda miyiga ah, sida Kobcinta KobcintaTM beeraha siinta barnaamijka.
Tilmaamahan, mulkiilayaashu waxay ugu deeqaan dhul beereed si ay aasaas u noqoto bulshada sida SWIF. Inta badan hay'adaha samafalka ayaa iibin doona dhulka, laakiin SWIF way sii haysan kartaa. Deeq bixiyuhu wuxuu helayaa gargaarada canshuurta iyo dakhliga nolosha. Gobolladu waxay joogteeyaan saldhigooda canshuurta. SWIF waxay bixisaa dhulka, inta badan kiraystayaasha muddada dheer, dakhliga wuxuu taageeraa shaqada bulshada dhexdeeda - laga bilaabo ganacsiga amaahda ilaa ilmanimada hore iyo in ka badan. Ilaa hadda, SWIF waxay heshay 1,650 hektar oo ah dhul beeran oo la tabarucay oo in kabadan daraasad barnaamijyo isku mid ah tan iyo bilowgii guud ahaan Maraykanka
Geof iyo Leann waxay tusaale u yihiin kireystayaashaas. Waxay kiraysteen dhul ay SWIF hadda leedahay muddo sanado ah - SWIF waxay sii wadaa xidhiidhka qofka guriga leh ee asalka ahi bilaabay iyaga. Waxay taageero ka helaan kuwa kale si ay u bilawdaan sidii beeralayda yaryar oo mar dambe ay u koraan ganacsigooda. "Waanu qadarinaynaa dhammaan mulkiilayaasheenna," ayuu yiri Geof. "Waa sharaf mudan in la isticmaalo dhulkooda."
Talo ku socota mid ka mid ah had iyo jeer wuxuu ku dhuftay Geof: "Inta badan waxaad siisaa, inta badan aad hesho." Taasi waa sabab weyn oo uu ku bilaabay hagaha Zachary Walton. Zac wuxuu ku koray beer ku dhow Bricelyn wuxuuna la kulmay gabdhaha Johnson inta lagu jiro kuleejka. Sanadkii 2011, aabaha geof iyo aabihii beeraha ayaa geeriyooday. Geof wuxuu ku casuumay Zac inuu ka caawiyo dukaanka iyo shaqooyinka garoonka ee xagaaga.
"Waxaa loola jeeday inay noqoto," ayuu yiri Leann. "Waa sida qeyb ka mid ah qoyska. Waan sameyn karno isaga la'aantiis. "Zac ayaa ogolaaday inuu taam yahay. Waa wax uu ku raaxaysto, si fiican u shaqeeyo oo wuu qaban karaa si uu u noolaado nolol fiican. "Markii aan ahaa ilmo, waxaan doonayay inaan beeraha sidoo kale ku shaqeeyo," ayuu yiri Zac. "Anigu fursad uma helin."
Maanta, waxay wada shaqeeyaan dhammaan dhinacyada ganacsiga. Qorshayaasha mustaqbalka ee lagu gudbo beeraha waxaa ka mid ah Zac, iyo sidoo kale gabdhahooda. "Qeybta madadaalada ayaa ah in gabdhahayga ay ii heleen lammaanahayga beerta," ayuu yiri Geof. Waxa kale oo ay ahayd iskaashi wanaagsan oo u dhexeeyay qoyska Johnson iyo SWIF. "Waxaan jeclahay in aan arko dakhliyada shaqada," ayuu yiri Geof. "Anigu waxaan helayaa nolol iyo ka caawinta bulshada waqti isku mid ah."